एसएलसी नगरेका कसरी प्रधानन्यायाधीश भए ? सर्वोच्चलाई डा. केसीको प्रश्न « Postpati – News For All
एसएलसी नगरेका कसरी प्रधानन्यायाधीश भए ? सर्वोच्चलाई डा. केसीको प्रश्न
काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पक्राउ परेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा.डा. गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।